C Spire neUS Cellular vatove vanopa kubatana kweApple Watch LTE | Ndinobva mac
Nekuuya kwevaviri, vatanhatu ndivo vanoshanda vanopa muUnited States mukana wekunakidzwa nekubatana kwedata paApple Watch Series 3 LTE. Ivo vanoshanda C Spire uye US Cellular, Joinha AT & T, Sprint, T-Mobile uye Verizon, kupa izvo dhata zvirongwa zvekubatanidza kunetiweki kubva pachiuno chechiuno.
Mari inobhadharwa pamwedzi iri pakati pemadhora mashanu negumi Izvi ndizvo zvinoshandiswa nevashandisi vanoda kuunganidzwa mune yavo Series 3 LTE nemumwe weava vanoshanda vanofanira kubhadhara. Chokwadi ndechekuti usati watanga kubhadhara vese vatengi vanozove nemuedzo nguva yemwedzi mitatu.
Zviripachena kuti kufukidzwa kunopihwa nevaviri vanoita izvi kwakatonyanya mumusika unotongwa nevakuru vana, asi US Cellular inopa kufukidzwa mumatunhu makumi maviri nematatu uye ine vangangoita mamirioni mashanu evatengi. Saizvozvowo, C Spire inotarisa zvakanyanya kuchikamu chekumaodzanyemba chenyika, kusanganisira Mississippi, Alabama, kuchamhembe kwakadziva kumadokero kweFlorida, neMemphis.
Uye kuSpain mamodheru eLTE haasati asvika
Tichiri kuFrance, mawatch acho anga achitova nekambani yeFrance Orange kubva payakatangwa, kuSpain isu tichakamirira nemoyo wese kusvika. Apple haiburitse chivimbiso pane mukana wekutanga Apple Watch mune dzimwe nyika uye dzichangoburwa kuti dzigamuchire dzave Mexico, Brazil neSouth Korea. Ndinovimba havanonoke zvakanyanya nekutaurirana pakati pevashandisi uye panguva yekutanga chirongwa chitsva munaGunyana nekubatana kweLTE, iyo inosvika kune dzimwe nzvimbo dzisingawanikwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » C Spire neUS Cellular vatove vanopa kubatana kweApple Watch LTE